War deg deg ah: Dowladda Col. Cabdullahi Yuusuf oo xirtay idaacadaha ugu weyn Muqdisho iyo TV-ga AlJazeera lana filayo in ay albaabada u laabto telefoonnada goor dhow si loo xasuuqo qaar ka tirsan shacabka ku dhaqan Xamar. Ruunkinet 15/01/07
War ka soo baxay xafiiska nabad sugudda dowladda madaxweyne Yuusuf ayaa maanta albaabada u laabay idaacadihii ugu weynaa magaalada Muqdisho.
Idaacadahan oo kala ah HornAfrik, Shabeelle iyo Qoraanka Kariimka ayaa qoraal lagu siiyay in ay joojiyaan in ay ka hadlaan idaacaddooda ayadoo mas'uuliyiinta sare ee idaacadahaasi loo lagu war geliyay in ay tagaan xafiiska nabad sugidda magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, waxaa lagu wargeliyay wariyeyaasha Al Jazeera in ay joojiyaan tebinta wararka Soomaaliya ayadoo la filayo in lagu ammri doono in ay dalka ka baxaan.
Arrintan ayaa la sheegay in ay dowladda damacsan tahay in ay xaquuq ballaaran ka geysato magaalada Muqdisho ayadoo wararka qaar ay sheegayaan in loola dan leeyahay beelo gaar ah.
Sidoo kale, waxaa la filayaa in dhawaan albaabada loo laabo xarunta telefoonnada Muqdisho iyo gobollo kale si aanu u bixin xasuuqa ay dowladda la damacsan tahay qaar ka tirsan shacabka ku nool magaalada Muqdisho.
Sida ay dad badani qabaan waxaa arrintan xad gudub ku tahay xuriyadda saxaafadda oo ay dowladda horay u ballan qaaday in ay ilaalin doonto sida ku qoran dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.